नाकमा चिल्लो वा खिल आउन नदिन के गर्ने ? | Hamro Doctor News
आमालाई कोल्ड कफ भए बच्चा जन्मनु अघि नै हुन सक्छ 'दमको रोगी' !
नाकमा चिल्लो वा खिल आउन नदिन के गर्ने ?
सुन्दर अनुहार सबैको चाहना हुन्छ । तर विविध कारणले सुन्दरतामा कमजोरी आउँछ । सुन्दरता कमजोर गराउने कारण मध्ये नाकको बाहिर पटी छालामा देखिने बढी चिल्लोपना वा स–साना काला वा सेता खिल हुन् । नाकमा चिल्लो वा यस्ता खिलहरु के कारणले आउछ ? र कसरी आउन नदिने वा हटाउने ?वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ट रोग विशेषज्ञ डा रिमा श्रेष्ठका सुझाव :
नाक स्वास्थ्यका लागि मात्र हैन सौन्दर्यको लागि पनि महत्वपूर्ण अंग हो । त्यस कारण नाकको भित्री तथा बाहिरी (नाक वरिपरीको छाला ) भाग स्वस्थ र सफा हुनु पर्छ । नाक वरिपरीको छालामा विशेष गरेर चिल्लो, काला तथा सेता खिल आउने समस्या धेरै व्यक्तिमा हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा नाकमा आउने चिल्लो वा खिल बारे धेरै भ्रम छ । सानोमा बढी चिल्लो खायो वा लायो भने यस्तो हुन्छ, यसलाई निचोरेरै हटाउन सकिन्छ, भन्ने भ्रम मात्र हो ।
यस कारण नाक वरिपरी छालामा चिल्लो वा खिल आउँछ:
खिल देखा पर्दा गर्नै नहुने कुरा:
अधिकांश मानिसको बानी हुन्छ, नाक वरिपरी यस्ता खिलहरु आए कोट्याउने, वा निचोर्ने । यस्तो गर्दा छालामा प्वाल पर्नुका साथै खाल्टा–खाल्टा दाग देखिन्छ । इन्फेक्सन भयो भने कान वरिपरीको भाग दीर्घकालिन कुरुप नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले पनि यो बढ्दो उमेरसँगै ग्रन्थीको प्रभावले देखा पर्ने समस्या भएकाले आउँछ, जान्छ । सकभर चलाउनु हुदैन् ।
चिल्लाोपना वा खिल आउन नदिन यसो गर्नुस्:
Last modified on 2019-08-12 06:56:53
रुघाखोकी वा कोल्ड कफ, प्रायः मानिसले यसलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् । यो समस्यालाई लिएर...
आरसिटी किन गर्ने ?